Onye Bụ Ndị Na-ege Gị Ntị n'Ezie? | Martech Zone
Tuesday, June 14, 2011 Wednesday, October 16, 2013 Douglas Karr
Otu n'ime nghọtahie bụ isi gbasara mgbasa ozi n'ịntanetị bụ ịmata onye ndị ị na-ege ntị bụ. Ọtụtụ mmadụ na-elekwasị anya na ma olile anya ha ma ọ bụ na ọ nọ. Izu a, anyị na otu ụlọ ọrụ rụrụ arụ na-eme mkpesa na atụmanya C-ya enweghị ntanetị.
Agaghị m arụ ụka ma nke ahụ ọ bụ eziokwu. Mana usoro ntanetị nwere ọtụtụ mmadụ dị iche iche nwere ike imetụta atụmanya C-ọkwa ma mee ya n'ihu ha. Ememme mmekọrịta na-enye ohere. IZIR throughTA site na saịtị dịka LinkedIn na-abịarukwu gị nso. Blog posts, mmekọrịta mmadụ na ibe ya na ndị na-eso ụzọ na-enyere gị aka ịnọgide na-agba gburugburu atụmanya ahụ ma hụ ụlọ ọrụ gị anya.
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ụlọ ọrụ gị na-achọ ndị na-achụ ego mmalite na ndị ọchụnta ego, mgbe ahụ ụlọ ọrụ ndị na-ahụ maka nkà na ụzụ dị elu, IP na ndị ọka iwu mbido, na ndị na-edekọ ego mmalite bụ nnukwu ndị mmadụ ga-enweta n'ihu. Ha nwere mmekọrịta ma nye nzacha na nchedo atụmanya ndị ahụ. Mmetụta ha na ị ga-enweta n'ihu onye ị chọrọ.
Ka ị na-arụ ọrụ mmekọrịta gị na mmadụ, atụla onye ndị ọbịa ahụ bụ ma ọ bụ ebe ha si, lekwasị anya ma ndị ọbịa ahụ na-ekwu maka gị ma na-ewetara gị atụmanya ahụ! Mmekọrịta gị na ndị ahụ na-eme ihe nkiri na ndị nzacha ahụ bụ nke bara uru nke ị na-ekwesịghị ileghara anya.